China 2020 factory factory okenye okenye maa ụlọikwuu ọbọgwụ / goose ala na-ehi ụra akpa wholesaler factory na-emepụta | Xueruisha
A na-ehi ụra a na-ehi ụra nke 20D 400T windproof, waterproof na dọkatụrụ adọka na-eguzogide ọgwụ naịlọn, nke dị mma ijikwa, akpụkpọ-enyi na gburugburu ebe obibi. Ọ nwere ike ichekwa okpomọkụ nke ọma, belata mgbasa mgbasa, gbochie ikuku oyi ịbanye, yana ụfọdụ ikike antibacterial, na-eme ka ọ dị ọcha na ahụike maka iji ya kwa ụbọchị. Ihe eji ejuputa ihe bu 90% ogo di elu, nke nwere ike mejupụtara nke 650 + na ihe njuputa nke 600g, nke nwere ike inye oke ọkụ na nchedo oyi na-enweghị ịbawanye ibu ahụ, na-akọwapụta nghọta onye ọrụ banyere mmekọrịta dị n'etiti njuputa na okpomoku. Nke kachasị mkpa, ụdị ọbọgwụ a nwere ezigbo nguzogide mmiri, ma nwee ogo dị elu, nke nwere ike ịnwe ike na nchekwa ọkụ. Akpa ụra a bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ere ahịa n'èzí n'ahịa, ọ bụkwa ụdị a ma ama nke nwere ụdị mummy. Ime ụlọ nke akpa ụra a ka anyị mere karịsịa. Dị ka anyị na-eji 3D (akụkụ atọ) kwụ ọtọ na igbe ụkwụ, nke nwere ike izere enweghị nsogbu nke ala ọwa ọ bụla mgbe ejiri akpa ụra maka oge nke ga-emetụta arụmọrụ njigide ọkụ. A zuru ogologo thicken windproof warara nwere ike igbochi ukwu nke okpomọkụ leakage site mkpọchi uwe. Nhazi nke olu olu ga-enye gị ohere ihi ụra nke ọma n'echeghị ọnwụ nke okpomọkụ site na azụ gị. E wezụga mkpuchi dị arọ bụ U dị ka nkasi obi na obi ụtọ, Hood shrink string, Flap Velcro na usoro ndị ọzọ akọwapụtara bụcha maka ịdị ọkụ na-ehi ụra. N'agbanyeghị ebe ị na-aga, na n'agbanyeghị ihe ị na-eme, anyị kwenyesiri ike na akpa akwa ụra a maka gị. Kedu ihe ị na-atụle? Ma ọ bụ gịnị na-echegbu gị? Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla, biko egbula ime ka anyị mara. Ndị ọrụ ọrụ anyị ga - edozi nsogbu gị ma hazie azịza maka gị ozugbo enwere ike.
Họrọ akpa ụra ịrahụ ụra (nkasi obi)
1. Chọpụta ọnọdụ okpomọkụ ị ga-ama ụlọikwuu. Agbanyeghị na ọnụọgụ a dịgasị iche site na oge ọkọchị na ihu igwe, n'ọtụtụ oge, ọnọdụ ihi ụra nke ndị na-anụkarị njem na-adịkarị n'etiti nkeji asaa℃ na n'elu zero 7 ℃.
2. Gbanwee ọnọdụ okpomọkụ a tụrụ anya n’elu dị ka mmasị onwe gị na ọnọdụ a kapịrị ọnụ ị pụrụ ịdị na-eche ihu.
3. Dịka uru okpomọkụ a gbanwere, zoo aka na nkasi obi (nkasi obi) nke ndị nrụpụta nyere iji họrọ akpa ụra. Okwesiri ighota na dika uzo nke ndi n’icheputa ihe di iche adighi otu, ụkpụrụ ndi ndi emeputara nyere bu ntughari aka, abughi ihe kwesiri n’agbanyeghi.
Nke gara aga: Ihe nnochi ohuru nke 2020 ihe eji eme okomoko nke oma oche ala
Osote: 2020 emeputa elu 90% ala jupụtara ihi ụra akpa na asọmpi price
Ozuzo shei waterproof rip-akwụsị obere m ...
2021 ewu ewu na-egbuke egbuke agba ala jupụtara mummy sle ...